Soarano : fivarotana am-polony may tao amin’ny Building Ramaroson | NewsMada
Par Taratra sur 22/05/2018
Nitrangana firehetana tampoka tao amin’ny farany ambanin’ny Building Ramaroson, teny Soarano, ny alahady hariva teo. Magazay am-polony nirehitra, an-tapitrisany ny entana may. Naharitra adim-pamantaranandro maro vao voafehy tanteraka ny afo…
Nitrehitra ireo magazay fivarotana an’ireo Sinoa sy Malagasy am-polony maro tao an-toerana. “Tokony ho tamin’ny 2 ora teo no nisy setroka nivoaka tao an-toerana. Mihidy ny tsena noho ny andro alahady. Raha ny tokony ho izy, tsy misy olona anatin’ireo fivarotana ireo, ankoatra ny mpiambina izay ety ivelany”, hoy ny filazan’ireo mpivarotra tonga teny an-toerana namoaka ny entany. Ankoatra ireo Sinoa mantsy, misy Malagasy ihany koa manana toeram-pivarotana ao.
Vetivety ny nielezan’ny afo tamin’ireo magazay am-polony tao ambany. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina sy ny Emmo/Reg. Ny mpamonjy voina nanao ny asany namono ny afo, ary niditra tany anaty magazay. Ireo mpitandro filaminana kosa niaro ny manodidina, satria nitangorona avy hatrany ny olona nahita izany. Tapaka mihitsy ny lalana teo Soarano mankany Behoririka vokatr’ity loza ity.
Nikoropaka rahateo ny manodidina noho ny tahotra ny hiitaran’ny afo. Hatramin’ireo mipetraka any ambony aza, nihorohoro ihany, ka nisy ny nivoaka sy namoaka entana. Efa nahazo toky tamin’ny mpamonjy voina ny amin’ny fifehezana ny afo vao nilamina.
Nanahirana ihany anefa ny famonoana ny afo tamin’izany satria noho ny fisian’ireo efitra maro sady mbola nikatona avokoa. Efa tamin’ny 7 ora hariva vao maty tanteraka izany io alahady io. Soa ihany fa tsy nisy ny olona naratra na aina nafoy.
Mandeha ny famotorana
Misokatra ny fanadihadiana manodidina ity firehetana ity. Raha ny filazan’ny mpamonjy voina aloha, vokatry ny fipoahana herinaratra no nahatonga ny loza. Misy foana anefa ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana ka amin’izay ahafantarana ny tena marina. Tsy mbola fantatra ny totalim-bidin’ny entana simba sy ny may, saingy tombanan’ny mpivarotra fa efa an-tapitrisany maro izany.
Amin’ny ankapobeny, tsy misy aro afo amin’ireny toerana ireny. Nanahirana ny fikarohana vavarano. Notarihina tamin’ny kamiao avy aty ivelany ny rano. “Mila fanaraha-maso ny taribin-jiro amin’ireny trano fivarotana ireny. Mety efa antitra, na ratsy ny kalitaon’ny tariby ka izao miteraka firehetana izao. Tokony hatao koa ny fanaraha-maso matetika ireny toerana ireny sao misy ny zavatra tsy ara-dalàna, ny fitaovana famonoana afo”, hoy ny fanazavana. Niverina tamin’ny laoniny ny filaminana teny Soarano. Mbola nisy ihany ny fahatapahan-dalana teny an-toerana, omaly noho ny famoahana entana tao amin’ireo toeram-pivarotana an’ny Sinoa.